Warar - Maxay tahay faa'iidada iyo faa'iido darrada PLA iyo dhalada qalabka PET ee warshadaha buuxinta?
Waa maxay faa'iidada iyo faa'iido darrada PLA iyo dhalada qalabka PET ee warshadaha buuxinta?
Iyada oo ku saleysan arrinta kala-goynta qashinka, qiimaha iyo ilaalinta deegaanka, dhalada PLA ma tahay midda guud ee warshadaha cabitaanka?
Laga soo bilaabo 1-dii Luulyo, 2019, Shanghai, Shiinaha waxay hirgelisay kala-go'ii qashinka ee ugu adkaa. Bilowgii, waxaa jiray qof qashinka qarkiisa ag taagnaa oo caawiyay oo hagayay kala soocista saxda ah, oo u baahan kala saarida dib loo isticmaali karo, qashinka Jikada, qashinka kale, qashinka halista ah iwm.
Laga soo bilaabo arrinta kala-soocidda qasabka ah ee khasabka ah, halkee ayay aadayaan dhalooyin cabitaanno kala duwan leh? Laga soo bilaabo su'aasha ugu kulul iyo jawaabta ku jirta qoondada, Maxay uga samayn la'yihiin biyo caag ah / soodhaha / dhalooyinka caanaha PLA?
Sidaan ognahay, dhalooyinka cabitaanada waxaa laga sameeyaa PET, PP, PE, PC. Qaar ka mid ah dhalooyinka biyaha macdanta ah, ee ku jira heerkulka sare iyo xaaladaha aashitada, sida biyaha kulul, aashitada, tubta dhanaan, khal, iwm. Dhalooyinka biyaha macdanta guud ahaan waxaa la isticmaalaa hal mar. Dib loo cusbooneysiin karo laakiin aan la nusqaamin karin boqollaal sano.
Dhalada PLA waxaa hoos loo dhigi doonaa 50 sano gudahood xaaladaha dabiiciga. Crystalline PLA, sheyga kaliya ee aragti ahaan loo adeegsan karo codsiyada xiriirka cuntada, wuxuu ubaahan yahay isku-darka maraakiibta (hydrolysis) si qaab-dhismeedka looga dhigo mid la heli karo. Waxaa loo beddelay CO2 iyo biyaha ka tagaya ku dhowaad 20% miisaanka asalka ah, laakiin maadada ka dhalata waxay kaliya siinaysaa qaab-dhismeedka compost-ka oo aan lahayn nafaqo. Tani si wax ku ool ah ayaa loo tuuraa, halkii dib loo isticmaali lahaa.
Waxaa lagu xisaabinayaa wax soo saarka 500,000, qiimaha pre-xayawaanka 21-garaam waa 0.041 US dollars.
Qiimaha horudhaca PLA 21-gram waa $ 0.182. Labada kharash waxay ku kala duwan yihiin qodob dhan 4.5. La kulanta farqiga noocan oo kale ah, imisa shirkadood oo cabitaan sameeya ayaa awoodi kara?
Soo saare ahaan warshad buuxinta cabitaanka, Higee Makiinado （Shanghai） Co., LTD waxay bixin kartaa qadka oo dhan oo ka sameysan sameynta dhalada, dhalada dhalada lagu buuxinayo calaamadeynta iyo calaamadeynta illaa xirmada kama dambaysta ah. preform-ka nooc kasta oo dhalo qaab ah. Dhalada ayaa markaa aadeysa 3 1 monoblock oo makiinada wax lagu xiro buuxinaya. Dhalada PLA ma ku habboon tahay dhammaan tallaabooyinka socda ee mashiinka buuxinta dhalada 3 1?
Waa maxay faa'iidada iyo faa'iido darrada PLA iyo dhalada qalabka PET ee warshadaha buuxinta? Wadamadee ayaa isticmaala dhalooyin badan oo PLA ah? Kusoo dhawow si aad fikradahaaga ula wadaagto emaylka admin@higeemachine.com una wac +86 18616918471. Aan isla falanqeyno.
Waqtiga dhejinta: Dec-17-2019